I-china pp ibhokisi lukathayela lomkhiqizi ocacile nomhlinzeki | Sihai
Kk ishidi lukathayela lingasetshenziswa ku-express, imvamisa, kungenxa yebhokisi lokuveza, ukuhanjiswa okucacile. Kk ishidi elingenalutho liyi-twin-wall structure, liyakwazi ukugoqeka, isakhiwo se-twin-wall silungele imikhiqizo yokuvikela lapho ithunyelwa.
Kk ishidi lukathayela lingasetshenziswa ku-express, imvamisa, kungenxa yebhokisi lokuveza, ukuhanjiswa okucacile. Ishidi elingenalutho liyi-twin-wall structure, liyakwazi ukugoqeka, isakhiwo se-twin-wall siyinto efanelekile yokuvikela imikhiqizo ekuthunyelweni. Kk ishidi elingenalutho lingenziwa ngezifiso izinhlobo eziningi zebhokisi lephakheji, isitsha sepulasitiki se-express, ibhokisi elivezayo futhi lingangeza ukwahlukanisa kwezikhwama ezihlukile nokuveza.
Ibhokisi le-pp elingenalutho lokuveza ibhokisi kulula ukugoqeka, ukonga isikhala, ukulethela amakhasimende isilinganiso sokusebenzisa kakhulu. Ibhokisi le-pp elingenalutho lokuveza ibhokisi lenziwe ngezinto ezilula nezihlala isikhathi eside, elingenamanzi aqinile, i-mildew, i-fireproof, i-anti-static, i-anti-corrosion, i-anti-wear, i-anti-UV, i-anti-vibration, i-anti-low lokushisa neminye imisebenzi. Le misebenzi iqinisekisa ubuqotho nokusebenza kwebhokisi ngezinga elikhulu, kuhle ukuvikela imikhiqizo lapho ithunyelwa futhi ihamba. Kk ibhokisi lukathayela elinoketshezi lingenziwa ngezifiso ukuphrinta kwemikhiqizo ehlukile nelogo, imvamisa ukuphrinta kungu-silkscreen, okunye kungenza ukuphrinta kwe-UV okusetshenziselwe ngaphandle
Langaphambilini pp ibhokisi lokhetho eliyize
Olandelayo: pp lukathayela wokuvikela ishidi